Laascaanood: Qoysas booyado biyo sida waddada ku suga si ay biyo uga baryaan - Radio Ergo
(ERGO) – Boqollaal qoys oo ku nool deegannada kala ah Gobdheere, Ceel-jeex iyo Gubad oo ku yaalla koonfurta gobolka Sool ayaa si ay biyo u helaan waddada u istaaga booyado biyo u iib geeya deegaanno kale.
Dadkaasi waxaa ka mid ah Maxamuud Faarax Cilmi oo ku nool deegaanka Gubad oo 27 km koonfur kaga beegan magaalada Laascaanood, ayaa xilliga habeenki istaaga wadada, waxay ku qaadataa 4-5 saacadood in booyadi soo marto.
Sababta uu habeenki u doortay ayaa ah in inta badan gawaaridu socdaan habeenkii. Dhibaato ayuu sheegay inay ku tahay wakhtiga dheer ee ay wadada joogaan, wuxuuna xusay in dadka maalinti istaaga ay gacanta u haatiyaan dadka isaga la mid ah ee habeenki istaagana ay toosh u shidaan si ay ugu sheegaan in biyo la’aan haysto.
“Dhibaatada aan ku qabo istaaga waddada waa badan tahay. Xili jiilaal ah oo kulayl badani jiro ayaa lagu jiraa maalintii waa dhibaato, habeenkii sidoo kale toosh ayaan qaataa waa dhib guuraha habeenkii deegaanka xitaa waxaa ku badan baballaha gurguurta iyo kuwa socda sida abeesada xitaa booyaduhu waa kaa cabsanayaan habeenkii, laakiin waa noo joogsandaan badi qaarkoodna waa na dhaafaan,” sidaa waxaa yiri Maxamuud.
Wuxuu xusay in meesha ay ka baxday biyihi ay u isticmaali jireen nadaafadda sida qubayska oo kale. Raashinka qoysku isticmaalo ayaa dad ayqaraabo yihiin uga soo dhiiba magaalada laascaanood. Xoolo dhaqatada awooday inay guuraan ayaa u haaamay deegaanno kale basle qoysaska inta kale ayaa ku sugan deegaankan.
“Xaaladdu haddii ay sidan ku sii socoto waxaa dhici karta in dadku biyo la’aan u dhintaan markii hore biyaha waxaan ka heli jirnay dad deegaanka ka soo jeeda oo dibadda jira oo taangiyo ayaa na loogu shubi jiray todobaadkii hal mar wax dhibaato ahna kumaan qabin, laakiin muddo bil ah biyaha waddada ayaan ku noolnahay,” Ayuu yiri Maxamuud.
Deegaanka Gubad ayaa waxaa ku nool laba boqol iyo konton qoys oo qaarkood colaado ay uga soo barakaceen deegaannadooda iyo kuwa abaaro barakiciyeen. Maxamuud ayaa muddo afar sano laga joogo colaad uga soo barakacay deegaanka Dhumay oo ku yaalla isla koonfurta magaalada Laascaanood.
Booyadaha ay biyaha ka baryayaan oo ka imaada Laascaanood ayaa biyaha geeya deegaanno ay ka mid yihiin Maraalay iyo Dabataag.
Cabdiqaadir Cali Maxamed wuxuu waddad u istaaga si uu biyo u helo muddo ka daban labaatan maalmood, booyadaha qaar ayuu sheegay inysan u istaagin oo orad ku dhaafaan balse marnaba kuma soo noqdo guriga asagoo fara maran.
“Sideed fiidnimo ilaa iyo 12 habeen barki ayaan gaaraa si aan biyo u helo, biyaha aan helno naguma filna, 10 neef o ari waxaan waraabiya shan maalin kadib maadaama aanan helin karin biyo aan maalin walba siiyo,” ayuu yiri Cabdiqaadir.
Cabdixakiin Cabdillaahi Maxamuud oo ka tirsan darawallada biyaha u iibgeeya deegaanka Maraalay oo Laascaanood 60 kiilo mitir ka xigta koonfur ayaa sheegay in uu waddada uu kula kulmo dad wata caagado oo biyo waydiista. Wuxuu xusay in booyadda uu wadaha ka yahay ay qaaddo afartan iyo shan fuusto, kaasi oo shanta fuusta u shuba dadka waddada taagan.
“Dhibaatada haysta dadkaas way idamaqdaa laakiin qaarkood waxaan u sheegaa in biyo u shubin karin maadaama shan fuuto ka badan aan bixin karin.”
Wuxuu sheegay in dadka uu biyaha ka iibiyo uu ka gado oo kaliya afartan fuusto maadama shanta fuusto ee kale uu ku caawiyo dadka uu jidka ku soo maro.